प्रधानमन्त्रीज्यू, गफ त निकै धेरै भयो, अब काम पनि गर्ने कि ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
रातमा सुतेको बेला होइन, दिउँसै सपना देखाए एमाले र माओवादी केन्द्रले । मुलुकको समृद्धिको सपना देखाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका यी दुई दलले वाम गठनबन्धन निर्माण गरेर चुनावपछि एकता गर्ने उद्घोष गरे । र, मुलुकमा दुई तिहाईको स्थिर र शक्तिशाली सरकार बनाई आर्थिक समृद्धिको शिखरमा पुराउने वाचाकसम खाए ।
गरेर देखाऊ लौ । जस्ताको तस्तै दुरुस्तै जनताले प्रचण्ड बहुमतमात्र होइन, झण्डै दुई तिहाईकै छेउँमा लगेर थपक्कै बसाइदिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेकै थिए, “फर्किने पुल भत्काइसकेका छौं ।” त्यसैले पनि होला, लाजकाज एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता पनि भयो । दुईतिहाईको २०१५ सालपछिको शक्तिशाली सरकार पनि बन्यो । अब ?
अब काम गर्ने बेला हो यो । “तँ चिता म पुराउँछु” भनेजस्तै वाम गठबन्धनले चिताएको कुरा जनताले हुबहु पुराइदिएका छन् । अब कुनै पनि बहानाबाजीले जनता झुक्किनेवाला छैनन् । नेकपा (नेकपा) र त्यसको सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार यतिबेला विकल्पविहीन छ, बहानाविहीन छ । जनता केवल परिणाममुखी काम चाहन्छ, काम, काम फेरि पनि काम ।
आशा र अपेक्षाको चाङ लगाइदिएको नेकपा र त्यसको सरकारका कुनै पनि बहाना सुन्ने पक्षमा छैन जनता । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडेपछि जनतामा आशा जाग्यो, अब केही हुन्छ कि त ? यद्यपि, सिण्डिकेटको विषय यतिबेला अलपत्रै जस्तो छ । गृहमन्त्रीले कामचोर ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्छु भनेको पनि धेरै भयो । त्यसमा सिन्का भाँचेको देखिएको छैन । सरकार चलायमान र गतिशील देखिएको छैन । बरु, अनावश्यक विवादमा फसेर प्रतिपक्षलाई कुर्लिने खेलको मैदान उपलव्ध गराइरहेको छ ।
आठ घण्टामा काठमाडौं आइपुग्ने यात्रुहरु तीन दिनसम्म नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्डमै सास्ती भोगिरहेका छन् । एकातिर बाढी र अर्कोतिर पहिरोले २२ जनाको त ज्यानै गइसक्यो । बाटाघाटा जलमग्न छन् । गाउँघर, कुनाकन्दराका त कुरै छोडौं, देशकै मुटु राजधानी काठमाडौंका सडक धान रोप्नलायक देखिन्छन् र आमजनता सास्ती खेप्न विवश छन् ।
राजधानीकै सडकमा यस्तो बेहाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उखानटुक्का जोडी जोडी विपक्षीको दोहोलो काढ्न सधै अग्रपंक्तिमा देखिनु हुन्छ । भाषणमा चीन र भारत दुबैतिरबाट रेल आइसके । भाषणमा समृद्धि समृद्धिको कुरा सुनेर जनता थाकिसके । सधैंको वर्षामा यतिको ज्यान गयो, यति घरबारविहीन भए, यति जमिन कटानमा पर्यो, यति भूभाग डुबानमा परे, नारायणघाट–मुग्लिङ सडकमा यति यात्रु थुनिए, यति जनधनको क्षति भयो भनेर कहिलेसम्म लाश र क्षतिको तथ्यांक लिएर बस्ने हँ ? यसलाई दीर्घकालीन रुपमै समाधानका लागि सरकार किन प्रयास गर्दैन ?
हिलोमा पछारिएका एक नागरिक
प्रधानमन्त्री ओली कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ, “भन्नेबित्तिकै रेल आउँदैन ।” हो, जगजाहेर भएको कुरा हो कि भन्नेबित्तिकै केही पनि हुँदैन । काम गरेपछि भनेका कुरा पूरा हुने हुन् । त्यसैले भन्नेमात्र होइन कि अब काम थाल्ने कि ? हामी यो भन्दैनौं कि एकैपटक देश सिङ्गापुर बनिहाल्छ । कम्तिमा मुलुकमा अब परिणाममुखी काम शुरु हुँदैछ र केही त हुन्छ भन्ने संकेत र सन्देश आम नेपाली जनताले महसुस गर्नेगरी काम शुरु गर्ने कि ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, गफ त निकै धेरै भयो, काम पनि गर्ने कि ?